खुलासा : पूर्वआइजिपी खनालले बालुवाटारबाट यादवलाई फोन गरेर महोत्तरी तिर लागेका थिए « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
खुलासा : पूर्वआइजिपी खनालले बालुवाटारबाट यादवलाई फोन गरेर महोत्तरी तिर लागेका थिए
- नेत्र पन्थी
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०८:३५
सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ तथा पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालको जोडबलमा रातारात काठमाडौं ल्याइएका पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नेत्र पन्थीलाई विस्तृत घटनाविवरण सुनाएका छन् :
सुरेन्द्र यादव :
हाम्रो पार्टी विभाजन गराउने योजना सतहमा अहिले आयो, खेल पुरानो हो । उपेन्द्र यादवजी स्वास्थ्यमन्त्री र म राज्यमन्त्री थियौँ । एउटै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएर पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटको थिइनँ ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारमा जोडिनुभएको एकजना डाक्टरले मलाई पहिले नै प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउन खोज्नुभएको थियो । तर, मैले मैले पार्टी अध्यक्षलाई नसोधी छुट्टै भेट्नुहुन्न भनेको थिएँ ।
हामी सरकारमा थियौँ । तर, संघीयता कार्यान्वयन र मन्त्रालयको कामको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीअध्यक्ष तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन ।
आफूसँग टकराव गरेको भनेर उपेन्द्रजीसँग प्रधानमन्त्री रिसाउनुभएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री योजनाबद्ध रूपमा हाम्रो पार्टी फुटाउन चाहनुहुन्थ्यो । तर, इस्तियाक राईको भने प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो ।
मन्त्रालयमा काम पनि गर्न दिनुभएको थिएन । त्योवेलादेखि नै पार्टीभित्र रेणु यादव असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । अध्यक्षले आफूलाई सम्मान दिनुभएन भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाएको थियो ।
अस्ति मंगलबार साँझपख आइजीसाब (पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई सांसद यादवले यो संवादमा सबै ठाउँ आइजीसाब भनेका छन्)ले फोन गर्नुभयो । डाक्टरसाब कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुभयो । गाउँ (महोत्तरी)को घरमै छु भनेँ । उहाँले भेट्नु थियो भन्नुभयो । ठीकै छ, लकडाउनपछि काठमाडौं आउँछु अनि भेटौंला भनेँ  ।
तर, उहाँले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट फोन गरेको छु, प्रधानमन्त्रीले तपाईंको सहयोग खोज्नुभएको छ भन्नुभयो । देशको प्रधानमन्त्रीलाई किन नभेट्ने, उहाँले सहयोग माग्नुभयो भने किन नगर्ने ? एउटा सांसदको रूपमा पनि उहाँलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य नै हो भनेर मैले जवाफ दिएँ । तर, अहिले त लकडाउन छ, खुलेपछि आउँछु भनेर दोहोर्‍याएँ । तर, उहाँले तपार्ईंहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने परिस्थिति अहिले नै आएको छ भनेर फोन राख्नुभयो ।
त्यसले मलाई चिसो बनायो । त्यसैले खाना बनाउन भन्छु भनेर भुइँ तलामा झरेँ । अलिक बाहिर गएर डा. बाबुराम भट्टराईलाई फोन गरेँ । घटनाक्रम सबै बताएँ । घटनाको पहिलो सूचना मैले उहाँलाई नै दिएँ । म संकटमा छु, तपार्ईंले आफ्नो काम गर्नुहोला भनेर आफ्नो नम्बर पनि दिएँ । फर्किएर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न थालेँ ।
मैले उहाँहरूलाई भनेँ, ‘म प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे, पेसाले डाक्टर हुँ । राजनीति धेरै बुझ्दिनँ, सीधा कुरा गर्छु । तपार्ईंहरूसँग बहुमत छ, तर तपार्ईंहरूकै पार्टीमा धेरै विवाद छ । आफ्नो पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनहोस् । अरू सांसद तपाईंहरूलाई कनि चाहियो ?’
मेरो सुझाबपछि महेश माननीयले संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ, त्यसैले तपाईंको सहयोग चाहियो भन्नुभयो । अझ अगाडि बढेर उहाँले ‘तपार्ईंका व्यक्तिगत विषय पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ, समस्या पनि हल गर्छौँ’ भन्नुभयो । उहाँको बोलीमा प्रलोभन दिने र त्रास देखाउने भाव थियो ।
म झसंग भएर हाम्रै पार्टीका माननीयहरूले भनेको पनि सम्झिएँ । उनीहरूले पनि वेलावेला मलाई प्रधानमन्त्रीको त्रास देखाउँथे । यो सरकार बलियो छ, प्रधानमन्त्री कडा हुनुहुन्छ, तपार्ईंलाई अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छन् भन्थे ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी सरकारमा भएको वेला म स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिएँ । आफैँ कुनै नीतिगत निर्णय गरेको थिइनँ । मलाई के डर थियो र ? मैले केही गल्ती गरेको छैन, त्यसैले मेरो केही व्यक्तिगत समस्या छैन भनेर आत्मविश्वासपूर्वक महेश माननीयलाई जवाफ दिएँ ।
मैले आफ्नै गाडीमा जान्छु भनेँ । तर, उहाँहरूले तपार्ईंको गाडी चाहिँदैन, हाम्रो गाडीमा जाऊँ भन्नुभयो । उहाँहरू विस्तारै ममाथि हाबी हुन थाल्नुभयो । मेरा कुरा सुन्न चाहनुभएन । जाऊँ जाऊँ मात्र भनेर मनोवैज्ञिानिक त्रास सिर्जना गर्नुभयो ।
मैले अस्वीकार गरे उहाँहरूले जबर्जस्ती गर्ने देखियो । तैपनि मैले आफ्नो गाडी निकाल्न भनेँ । ड्राइभर र पिएसओलाई गाडी लिएर पछिपछि आउन भनेँ । समाजवादीका प्रदेश कमिटी सदस्य राजीव यादव पनि मसँगै आए ।
वर्षौंदेखि मित्रता भएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, दुईजना सांसद । तर, उहाँहरूले सिर्जना गरेको अनौठो वातावरणबीच म उहाँहरूको गाडीमा चढेँ ।
मलाई असुरक्षा महसुस भइरहेको थियो । उहाँहरू भने हाँसेर कुरा गरिरहनुभएको थियो । त्यहीबीचमा बाटोमा मैले कौशलकिशोर यादवलाई भेटेँ । उहाँ हाम्रो पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ । केहीबेरमा हामी बर्दिबास होटेल पुग्यौँ । त्यहाँ फेरि उही कुरा दोहोरियो ।
महेश र किसन माननीयले हामीसँग समाजवादीका ९–१० जना सांसद पहिला नै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, पार्टी फुटाउन संख्याको समस्या छैन, तपार्ईंजस्तो ‘हेभिवेट’ माननीय खोजेको भन्नुभयो ।
उमाशंकर अरगरिया पनि बर्दिबासमै हुनुहुन्छ भन्नुभयो । उमाशंकर हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको सचेतक, तर महेश र किसन माननीयको सम्पर्कमा गइसक्नुभएको रहेछ, एकैछिनमा उहाँ पनि होटेलमा आउनुभयो ।
तर, म पार्टी विभाजनको पक्षमा छैन, मलाई किन यहाँ ल्याएको भनेर उहाँहरू सबैलाई मैले सोधेँ । उमाशंकरजीले भन्नुभयो, ‘उपेन्द्र (यादव)ले जे गर्नुभएन, हामी गर्न सक्छौँ । हामी संविधान संशोधन गर्छौं, यसका लागि हामीलाई ११ जना सांसद चाहिन्छ । यो मिसन पूरा भयो भने मधेसमा हाम्रो प्रतिष्ठा बढ्छ ।
हामीले जस पाउँछौँ ।’ हामी एक–अर्काका कुरामा सहमत भएनौँ । त्यसपछि हामी जनकपुरतिर लाग्यौँ । मैले गाडीमै उमाशंकरजीलाई सोधेँ, ‘विभाजनको तयारी के गर्दै हुनुहुन्छ ?’ उहाँले बसेर सल्लाह गरौँ भन्नुभयो । तयारीकै लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने हो भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो ।
जनकपुरमा हामी डा. सूर्यनारायण यादवको घर पुग्यौँ । उहाँलाई मैले अप्ठ्यारोमा परेको र उहाँको घर आउँदै गरेको संकेत गरेको थिएँ । यो कुरा प्रदेश २ का गृहमन्त्रीसम्म पनि पुगिसकेको थियो । तर, प्रहरी त केन्द्र सरकारमातहत हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: १२ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०८:३५